မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: သငျမသိသေးတဲ့ “Cheese in the Trap” က မငျးသား Park Hae-Jin အကွောငျး
ဝီကီမှာသွားရှာတာ သူ့အကြောင်းဘာမှ မတွေ့ခဲ့လို့ အားမရဖြစ်နေတာ မဗေဒါရေးတာလေး ဖတ်လိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်
မင်းသမီးကလည်း ဒီကားမှ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ စသရုပ်ဆောင်တာလို့ ဒီကားဖန်တွေစိတ်ပူတဲ့ မန့်တွေဖတ်ရတော့ သူ့အကြောင်းသွားရှာကြည့်တာ(အမှန်တော့ စီးရီးအနေနဲ့ ပထမဆုံးရိုက်တာ)
သူက စထွက်ထဲက ကားကြီးမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး အနေနဲ့ပါခဲ့ရပြီး နောက်၂ကားကလည်း ခေါင်းဆောင်နေရာ။ မျက်နှာသစ်ဆုတွေလိုမျိုးပါ ရထားတဲ့သူ ဒါရိုက်တာကလည်း ဒီကားအတွက် မရ မက ခေါ်ထားခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ ဇာတ်လမ်း/ညွှန်းသာပေါက်ကရ မဖြစ်ရင်
1/11/2016 5:56 PM
@Anonymous - ဟုတ်တယ်။ မင်းသမီးက သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်အတွက် Audition ကို သူများတိုက်တွန်းလို့ ၀င်တာတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ပြိုင်ဘက် ၃၀၀ ကျော်ကို အပြတ်အသတ် နိုင်ပြီး အဲ့ဒိ role ကို ရသွားတာတဲ့။ ဘယ်ကားလဲတော့ မေ့နေပြီ။ သူက မျက်လုံးလေး သိပ်မလှပေမဲ့ သရုပ်ဆောင်တော့ကောင်းတယ်။ တချက် တချက်တော့ Suzy နဲ့ ဆင်တယ်။ သူသရုပ်ဆောင်တာ ပြေပြေလေးနဲ့ သဘာဝကျတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ကြည့်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။ Park Hae-Jin က သူ့ကို မုန်းတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ပညာပေး သိမ်းသွင်းတာလေး သဘောကျလို့ ရေးဖြစ်သွားတာ။ နေသာထိုင်သာရှိသွားတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
1/11/2016 6:16 PM
mama eiei said...
👍will taste cheese fever cos of your your post Sis
1/11/2016 8:12 PM
Thank u for writing about him. I like him since watchedalove from star.
1/11/2016 8:40 PM
Dr Stranger မှာပါတာလဲ သူပဲလားဟေ သူအရပ်ရှည်တယ်နော် မျက်နှာလဲ ယောကျာ်းလေးပိုဆန်တယ် ခပ်အေးအေး ရုပ်ပေါက်တယ် you who come from star ထဲမှာ သူ့ကာရိုက်တာ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ မင်းသမီးကိုချစ်တာ အူတူတူနိုင်တာ မနာလိုတာ အာ့တွေသဘောကျတယ်
1/13/2016 7:57 AM